Ubanzi nobubanzi UkuCinga nokuPhelela likhulu, kodwa ulwimi lwaso lucacile, lichanekile, kwaye lugunyazisa. Incwadi iyinqobo yangempela, esithetha ukuba ivela ngokucacileyo kwiingcamango zikaPercival, kwaye ke ngoko yengubo epheleleyo, eqhubekayo. Akayicingi, akayicacisi okanye ayifumene. Akenzi namagama athile. Kubonakala kungekho lizwi ngaphandle kwendawo, akukho lizwi elisebenzisa kakubi okanye ngaphandle kokubaluleka. Omnye uya kufumana ukufana kunye nokwandiswa kweminye imigaqo nemigangatho eninzi equlethwe kwiiNkcazelo zeBulumko zeNtshona. Omnye ufumanisa izinto ezitsha, kwaneveli kwaye ziya kuba ngumngeni. Nangona kunjalo, bekuya kuba yingqiqo ukuba ungagqithisi ukugweba kodwa ugweme ngokwakho ngenxa yokuba uPercival akhathazeki ngokuzikhusela kumfundi ongaqhelekanga ngezihloko njengoko evumela ukuba ingcamango yenkcazo yakhe ichaze ixesha kunye nokulandelelana kwezichazo zakhe. Isibongo sikaHeindel kwi "Word to the Wise" siza kufaneleka ngokufanayo xa sifunda u-Percival: "Kunxuswa ukuba umfundi angawubambeli zonke iintetho zokudumisa okanye ukubeka ityala aze afunde umsebenzi ngokuqinisekileyo unelisekile ngokufanelekileyo okanye ukulahleka."
Le ngenye yeencwadi ezibalulekileyo zibhalwa kwimbali eyaziwayo neyaziwayo yale planethi. Iingcamango nolwazi luchaza isikhalazo kwisibongo, kwaye unayo "intonga" ye nyaniso. I-HW Percival ngumntu ongaziwayo kuluntu, njengoko izipho zakhe zokubhala ziza kubonakalisa, xa ziphandwa ngokungakhethi. Ndiyamangaliswa ukungabikho komsebenzi wakhe "ezininzi zokufunda" ezintlu ekupheleni kweencwadi ezininzi ezinzulu nezibalulekileyo endizifundileyo. Ngokwenene uyona mfihlelo egcinwe kakhulu kwihlabathi leendoda ezicinga. Ubumnandi obuhle kunye neemvakalelo zokubulela zikhutshwa ngaphakathi, nanini na ndicinga ngoloo ntsikelelo, eyaziwayo kwihlabathi lamadoda njengoHarold Waldwin Percival.
UkuCinga nokuPhelela NguHW Percival ngenye yeencwadi ezibalaseleyo ezibhaliweyo. Ijongene nombuzo omdala ubudala, uQoo Vadis? Savela phi? Kutheni silapha? Apho siya khona? Uchaza indlela zethu iingcamango zibe ziphumo zethu, njengezenzo, izinto kunye neziganeko, ebomini bethu ngabanye. Ukuba ngamnye wethu unembopheleleko yale ngcamango, kunye nemiphumo yabo kuthi nakwabanye. I-Percival ibonisa ukuba into ebonakala ngathi "ingxabano" kwimpilo yethu yemihla ngemihla inenjongo kunye neNkundla eya kubonakala ukuba siza kuqala ukugxila ekucingeni kwethu, kwaye siqale ukuCinga kwangempela, njengoko kuchazwe kumsebenzi wakhe. Ukuziphendulela ngokwakhe uyavuma ukuba akayena umshumayeli okanye utitshala, kodwa izipho kuthi i-cosmology esekelwe kwi-Intelligence. Umhlaba woMyalelo kunye nenjongo. Akukho ncwadi ye-metaphysical eye yabonisa ngokucacileyo, ngokuchanekileyo, ulwazi olufumaneka kule ncwadi. Uphefumlelwe ngokwenene kwaye uvuselela!
Eyona ncwadi igqwesileyo endakha ndayifunda; inzulu kakhulu kwaye icacisa yonke into ngobukho bomntu. U-Buddha uthe kwakudala loo ngcinga ngunina wazo zonke isenzo. Akukho nto ilunge ngakumbi kunale ncwadi ukuchaza ngokweenkcukacha. Enkosi.